Lalao lalao fikomiana 5 tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra - Wwe
Lalao lalao fikomiana 5 tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra
Ity herinandro ity dia manamarika ny faha-roapolo taonan'ny WWE No Mercy ho an'ny N64. Noho ny lalao ankafiziny sy mahafinaritra, No Mercy dia heverina ho lalao tolona tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra.
Tratry ny tsingerintaona faha-20 nahitana ilay lalao video fikafika lehibe indrindra tamin'ny fotoana rehetra. pic.twitter.com/Q1KvqX0KfB
- Pro Wrestling Sheet (@WrestlingSheet) 17 Novambra 2020
Hatramin'ny andron'ny arcade, ny lalao tolona dia ampahany lehibe amin'ny kolotsaina mpankafy fikomiana. Ny iray dia handany ora maro amin'ny filaharana ao amin'ny fivarotana horonantsary eo an-toerana miaraka amina farantsakely vitsivitsy miandry fatratra ny hilalao ilay WrestleFest mahazatra.
Rehefa lasa lalao video ny lalao arcade dia afaka nilalao avy amin'ny fiononan'ny sofany ireo mpankafy. Rehefa nihatsara ireo konsoly dia nihatsara koa ireo lalao ary vetivety foana ireo mpankafy dia afaka nilentika tamin'ny sasany tamin'ireo tsara indrindra natao tamin'ny fotoana rehetra niriny.
iza no tompon-daka amin'ny wwe divas
Ato amin'ity lahatsoratra ity, dia hijery dimy amin'ireo lalao tolona tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra isika.
WrestleFest - Ny lalao arcade tolona tsara indrindra sy mpihinana farantsa maro.
WWF WrestleMania: The Arcade Game - fifangaroan'ny herisetra amin'ny fomba fisaonana sy fikorontanana.
WWE 2K 13 & 14 - Ny mora indrindra no kinova farany tsara sy azo zakaina indrindra amin'ny fizahana karana 2K tsy misy kilema ankehitriny.
# 5 WCW / nWo Revenge dia lalao mitolona amin'ny N64
WCW / nWo Revenge dia mpividy N64 tamin'ny 1998
WCW / nWo Revenge dia traikefa lalao tolona mampihetsi-po tamin'izany fotoana izany. Fiantsoana tonga soa niverina tamin'ny lalao arcade tamin'ny lasa sy ny kinova farany tsara tamin'ny lalao WCW vs nWo: World Tour tamin'ny taona teo aloha.
Tamin'ny 1997/1998 WCW no orinasa mpiady lehibe indrindra manerantany ary io lalao io no nanaporofo izany. Ny lisitra fotsiny dia mampiseho WCW amin'ny tampon'ny heriny. Ireo angano toa an-dry Randy Savage, Hulk Hogan ary Sting dia nisy niaraka tamin'ny olon-tiana Diamond Dallas Page, Eddie Guerrero, Chris Jericho, ary Rey Mysterio Jr.
Valifaty WCW / NWO pic.twitter.com/CWdehB5ozo
- WWE 90 (@ 90sWWE) 14 Novambra 2020
Ny sary dia marevaka sy kuboid fa mahafinaritra mahafinaritra. Ny set WCW toy ny Halloween Havoc, Bash at the Beach ary Uncensored dia namirapiratra sy nahafinaritra. Ny endrik'ireo mpihetsiketsika dia sariitatra ary nanome ny lalao tantara an-tsary-tonga-to-fiainana vibe.
Ny lalao dia pickup tsotra sy mora. Afaka segondra dia afaka mandaka, mamely totohondry ary mifampikasoka ary mamoaka dropkicks, suplexes ary miakatra hatrany amin'ny famaranana sonia an'ilay mpiady tiany indrindra.
ny fomba fanapahana namana misy tombony
WCW / nWo: Ny valifaty no lalao tolona farany novokarin'ny THQ ho an'ny WCW
Ny lalao dia lozabe tokoa ka ny WWE dia hanao fiaraha-miasa folo taona miaraka amin'ireo mpamolavola ny lalao, THQ ny taona manaraka.
WCW / nWo: Ny valifaty dia mety ho daty ankehitriny satria ny lalao dia nanana safidy vitsivitsy, fomba ary lalao manokana saingy ho tsaroana hatrany ho lalao tolona tsara indrindra WCW hatrizay.
rehefa bandy tsy liana
tahotra ny tsy hahita fitiavana phobia mihitsy
ny ankizy tsy manaja ny ray aman-dreniny dia mitanisa
maninona no atao hoe fitiavana ny firaisana
sandan'ny mpitsara judy
maninona izy no misintona rehefa raiki-pitia